Krishnap.com.np: Windows7का केहि अप्ठ्यारा सुविधाहरू
Windows7का केहि अप्ठ्यारा सुविधाहरू
Microsoft को नयाँ अपरेटिङ सिस्टम Windows7ले अपेक्षित सफलता पाइरहेको छ । यसका 'कुल फिचर' को धेरैले प्रशंसा गरिरहेका छन् भने यसको लुक्सको पनि तारिफ गर्नेहरू धेरै छन् । हलुका र आकर्ष डिजाइनमा आएको Windows7का केही कमजोरी पक्ष पनि छन्, जसले प्रयोगकर्तालाई दिक्क लगाइरहेको छ ।
Windows7अघिको अपरेटिङ सिस्टम Windows Vista मा भएका कमजोर सुरक्षा व्यवस्था, हार्डवेयर ड्राइभर, नचाहिँदा नोटिफिकेसनहरूको समस्या समाधान गरे पनि यसमा अन्य खालका नचाहिँदा खालका सुविधा थपिएका छन् ।
अझै पनि सबैखाले प्रिन्टरको ड्राइभ समेट्न नसक्नु यसको कमजोरी हो भने अन्य सानातिना झमेला आइरहन्छन् जसले प्रयोगकर्तालाई दिक्क पार्छ । यसैगरी, नचाहिने ठाउँमा पनि धेरैथरीका छनोट उपलब्ध गराइएको छ । Windows7को होम प्रिमियम भर्सनमा भएका काम नलाग्ने फिचरबारे यहाँ चर्चा गरिँदै छ ।
१. IE (Internet Explorer) 8 चलाउँदाको झन्झट : Windows7मा इन्टरनेट एक्सप्लोरर- ८ (IE 8) र MS Word एकैपटक खोल्नुभएको छ भने तपार्इंले एउटा झन्झट व्यहोर्नुपर्छ । आर्इइ- ८ मा एकैपटक धेरै ट्याब खोलेको बखतमा वर्डमा काम गरेर पुनः आर्इइमा जान खोज्दा टास्कबारमा सबै ट्याव देखिन्छन्, जसले तपार्इंलाई द्विविधामा पार्छ । हाम्रो अपेक्षा आर्इइमा सोझै पुग्ने हुन्छ, तर पुग्न सकिँदैन । वर्षोदेखि टास्कबारमार्फ स्विच गर्ने बानी परेका हामीलाई यो सुविधाले भने झन्झट लगाउँछ । यसको साटो बरु प्वाइन्टर घुमाउँदा सबै ट्याब देखाउने, तर क्लिक गर्दा आर्इइमा स्विच गर्ने सुविधा दिएको भए राम्रो हुन्थ्यो कि ?
२. अटोमेटिक स्विच : माथिकै प्रसंगमा कुरा गर्दा मानौ तपार्इंले आर्इइमा भएका विभिन्न ट्याबमध्येको एउटा ट्याबमा रहेको वेबसाइट भिजिट गर्नुभयो अनि त्यससँगैको भिडियो ब्राउज गर्नका लागि माउस प्वाइन्टर र्सार्न खोज्नुभयो भने तपाईं पुनः MS Word मा फर्किनुहुन्छ । यसले प्रयोगकर्ताको समय खर्च गराउनुका साथै दिक्क लगाउँछ ।
यो फिचरले गर्दा नै धेरै एप्लिकेसन खोलिएको वेलामा माउस प्वाइन्टर सार्दा नचाहिने एप्लिकेसन खुल्छन् । छोटो समयमा फाइलहरूमा स्विच गर्न सकियो भनेर यो सुविधा थपिएको भए पनि एरो पिक फिचरले हामीलाई दिक्क बनाउँछ ।
३. ग्याजेटहरू : Microsoft ले Vista मार्फ ल्याएको ग्याजेट फिचरलाई Windows7मा कायमै राखे पनि यसमा केही अप्ठ्यारा छन् । भिष्टामा ग्याजेटलाई 'अटो हाइड' गर्न सकिन्थ्यो, तर Windows7मा यो सुविधा छैन । ग्याजेट हाइड गर्न राइट क्लिक गर्दै, भ्युमा गएर 'सो डेक्सटप ग्याजेट' अप्सनमा भएको टिकमार्क हटाउनुपर्छ । यो लामो एवं अप्ठ्यारो प्रक्रियाका कारण अधिकांश समय ग्याजेटहरू डेक्सटपमै रहन्छन् । जसले डेक्सटपलाई फोहोर पार्दै आवश्य एप्लिकेसन सञ्चालनमा समेत कठिनाइ हुन्छ । यसको साटो कुनै की थिच्दा ग्याजेट आउने/हट्ने सुविधा भए प्रभावकारी हुने थियो ।
४. झन्झटिलो थिम व्यवस्थापन : Windows7मा डेक्सटपको तस्बिर परिवर्तन गर्ने प्रक्रिया निकै झन्झटिलो छ । अपरेटिङ सिस्टममै भएको तस्बिर राख्न सजिलो भए पनि आफ्नो रोजाइका तस्बिर राख्न भने निकै कसरत गर्नुपर्छ । एक्सपी र भिस्टामा सहज तरिकाले थिम व्यवस्थापन गर्न सकिनेमा सेभेनमा विभिन्न प्रक्रियागत झन्झट छन् ।
Windows7मा एक्सपी र भिस्टाको तुलनामा धेरै राम्रो खालका थिम राख्न सकिने भए पनि झन्झटिलो प्रक्रियाका कारण प्रयागेकर्ताले असहज महसुस गर्नेछन् । यसको लामो प्रक्रिया नयाँ प्रयोगकर्ताका लागि झनै चुनौतीपुर्ण छ ।
जटिल कन्ट्रोल प्यानल
कन्ट्रोल प्यानलको प्रयोग गर्न सहज पार्न Windows7मा समूह छुट्याएर अप्सन राखिएका छन् । तर, विडम्बना नै भन्नुपर्छ, यसले कम्ट्रोल प्यानललाई झनै जटिल पारेको छ । खोजको अप्सन ठ्याक्कै भेट्न गाह्रो भएकाले केही समय बिताएर सबै अप्सन हेरेपछि मात्रै आफूले चाहेका काम गर्न सकिन्छ । यसैगरी, विन्डोज एक्सपीमा भएको 'एड अर रिमुभ प्रोग्रामस्' अप्सन 'प्रोग्राम्स एन्ड फिचर्स' मा परिवर्तन भएको छ । यसैगरी, 'एक्सेसिबिलिटी अप्सन' परिवर्तन भएर 'इज अफ एक्सेस सेन्टर' बनेको छ ।
धेरैले विन्डोजको पुरानो भर्सन विन्डोज ९८ मा भएको कन्ट्रोल प्यानललाई रुचाएका छन् । एक्सपीमा भएको कन्ट्रोल प्यानलको परिमार्जित रूपलाई नरुचाएका प्रयोगकर्ताले Windows7मा भएको परिमार्जनलाई कसरी बुझने ।
Posted by Krishna Pokhrel at 1:27 AM
Labels: ई-विश्व, कम्प्युटर
माइक्रोसफ्टलाई सेन्ट्रल डेस्कटपको चुनौती
अरबी भाषामा वेब ठेगाना
गुगलको आँखा टेलिभिजनतिर